Qeybta:General5 min akhris
Isniinta, Oktoobar 18, 2021, McKnight Foundation ku dhawaaqay ballan si loo gaaro qiiqa saafiga ah ee gaaska aqalka dhirta lagu koriyo oo dhan $3 bilyan deeqdeeda ugu dambayn 2050. Haddaba maxay ka dhigan tahay eber saafiga ah, maxaynu u daba galnay? Waxaan halkaan uga jawaabeynaa tan iyo dhowr su'aalood oo kale.
Sideed u qeexdaa eber saafiga ah?
Habkan adag waxa uu u baahan yahay in la baaro gees kasta oo ka mid ah deeqaha qiiqa sii daaya, joojinta maalgelinta soo-saareyaasha sare, sida maalgelinta shidaalka fosilka ee hadhay, la shaqaynta in ka badan 75 maareeyayaasha maalgelinta si ay u nadiifiyaan hantidooda, iyo si joogto ah ula xidhiidhida horumarkayaga.
Maxaa ku kalifay McKnight inuu u go'aansado eber saafiga ah?
Ballanqaadka McKnight wuxuu ku soo beegmayaa xilli dadka adduunka oo dhan ay la kulmaayaan gacmahooda ugu horreeya ee saamaynta xun ee isbeddelka cimilada iyo saynisyahannadu waxay isku raaceen in ay tahay in aan qaadno tallaabo la yaab leh oo lagu xaddidayo kulaylka caalamiga ah 1.5 ° C marka la gaaro 2050.
Habkan lagu baabi'inayo saamaynta sii daaya ee guud ahaan faylalkayaga macneheedu waxa weeye in aanu shaqaynayno badi khayraadkeena aadka u badan si aanu uga fogaano saamaynta ugu xun ee isbedelka cimilada.
Waa maxay sababta tani ay tahay arrin weyn?
McKnight iyo maalgashadayaasha kale ee hay'adaha ayaa awood u leh inay abuuraan isbeddel marka aan maalgelinno. Ganacsiyadu waa hal-abuurayaasha iyo maalgashadayaasha waa mishiinka dhaqaalaha ee maalgelin doona u wareegida dhaqaalaha tamarta nadiifka ah. Maaddaama ay lacagtu u socoto maal-gashi ku habboon cimilada oo ka fogaanaya soo-saareyaasha culus, waxaan dardargelin doonnaa u-guurka dhaqaale-kaarboon-yar.
Haddii aad rabto in aad wax ka qabato dhibaatada cimilada, muxuu McKnight u dhaq dhaqaaqi la'dahay sida ugu dhaqsaha badan si uu u beddelo faylalka maalgashiga?
Horay waanu u falnay. Ballanqaadkayaga eber ee saafiga ah waa mid xooggan sababtoo ah waxay ku dhistaa rikoodh la xaqiijiyay ee maalgashiga cimilada:
2013: Waxaa la cabbiray oo la bilaabay yareynta xoogga kaarboon ee faylalka dadweynaha.
2014: Waxaa la bilaabay barnaamijka maalgelinta saamaynta leh 10% oo deeq ah oo loo qoondeeyay maalgelinta saamaynta sare leh, iyo dhuxusha laga iibiyay faylalka dakhliga go'an. Iyada oo la adeegsanayo $100 milyan oo maalgashi, ayaa lagu abuuray sanduuqa Istaraatiijiyada Waxtarka Kaarboonka Mellon Capital Management inay u janjeeraan dhanka shirkadaha soo saaray gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo oo ka yar kuwa dhiggooda ah.
2015: Ku biirtay Cimilada 100+ halkaas oo qaar ka mid ah maalgashadayaasha adduunka ugu waaweyn ay riixaan 100-ka shirkadood ee ugu waaweyn si ay u dejiyaan bartilmaameedyo dagaal leh, oo saynis ku saleysan
2017: Maalgashigii la joojiyay ee shirkadaha leh kaydka dhuxusha iyo saliida ee ay hayaan maareeyayaasha xisaabaadka si gaar ah loo maamulo.
2019: Waxaa lagu dhawaaqay dhammaan maalgashiyada hantida dhabta ah waa inay lahaadaan dulucda joogtaynta lagu kalsoonaan karo.
2021: In ka badan 40% ee deeqda ayaa leh isku toosin hadaf iyo $500 milyan ayaa lagu maalgeliyay faylalka xalalka cimilada.
2050 waa fog yahay, maxaad u degdegi weyday?
Waxaan ku heshiin kari weynay in baahida wax loo qabto ay tahay mid degdeg ah. Aynu si cad u sheegno, waxaanu joognay oo aanu sii wadi doonaa in aanu sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah uga saarno hibaynteena -waxa aanu ku boorinayna asaageena in ay sidaas oo kale sameeyaan.
Waxaan ku faraxsanahay inaan mar hore joojinay maalgelinta shirkadaha leh kaydka dhuxusha iyo saliida, ku maalgelinay $500 milyan xalalka cimilada, oo aan la jaanqaadnay in ka badan 40% ee deeqdayada iyo hadafkeena. Horey u socoshada, cagteenu waxay si adag ugu taagan tahay xawaaraha si aan u sii wadno horumarka si degdeg ah, waxaana dib u soo sheegi doonaa marka aan gaarno marxaladaha ku meel gaarka ah ee muhiimka ah.
Sidee loo barbar dhigaa eber ka leexinta?
Waxaa jira xeelado badan oo lagu dhimo qiiqa qiiqa ku jira deeqaha. Divestment waxay si gaar ah u eegtaa qaybta shidaalka. eber saafiga ah waa hab aad u balaadhan oo aan kaliya la joojin maalgashiga shidaalka, laakiin in la sii wado annagoo yareynna qiiqa ku sii daaya dhamaan qaybaha kala duwan ee faylalkayaga.
Qeybo badan ayaa soo saara qiiqa kaarboonka, iyo habka eber ee saafiga ah ayaa doorbidaya maalgashiga shirkadaha soo saara wax yar, gaar ahaan marka la barbardhigo waxa teknoolojiyad ahaan suurtagal ah.
Sideed u cabbiri doontaa qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee ku jira faylalkaaga?
McKnight waxa uu leeyahay faham wanaagsan oo ku saabsan qiiqa ku jira maalgashiga suuqayada dadweynaha hadda, laakiin ma aanan cabbirin dhammaan faylalkayaga gaarka ah; Naqshadeynta lacagahan ayaa ah kuwo aan daahfurnayn.
Waxaan la shaqeyneynaa la-taliyayaashayada maalgashiga ee Goldman Sachs iyo Mercer si loo saleeyo macluumaadkaas hadda. Tallaabooyinka xiga ka dib markaan helno xog dhamaystiran waxay noqon doontaa in aan hawlgelino maamulayaasheena maalgelinta oo aan dejino yoolal ku meel gaar ah oo hammi ah.
Ma jiraan wax ganacsi ah oo ku yimid ballan eber saafi ah?
Ganacsiga muhiimka ah waa in aan u baahan doono in aan iska dhaafno maal-gashi sare leh iyo maareeyayaasha maaliyadda ee la xidhiidha. Si kastaba ha ahaatee, daadinta qaybahan halista badan ee faylalkayaga waxay dejin doontaa McKnight inuu horumariyo inta lagu jiro kala-guurka tamarta oo uu sii wado inuu noqdo wakiillo heer sare ah oo deeqdeena ah.
Waa maxay aragtidaada Ballanqaadyada MacArthur Foundation iyo Ford Foundation?
Waxaan soo dhaweyneynaa dhammaan dadaallada ay sameynayaan mu'asasooyin badan si loo yareeyo saameyntooda cimilada oo aan tixgelinno xalalka kaarboonaynta firfircoon ee qayb kasta. McKnight waxa uu si dhow ula shaqeeyay MacArthur iyo Ford Foundations saamayntayada istaraatajiyadaha maalgalinta waxaanu eegi doonaa fursadaha mustaqbalka ee lagu wada shaqayn karo oo aan ku keeni karno asxaab kale.
Waa maxay tusaalooyinka qaar ee maal-gashi cimilo-horumarineed uu sameeyey McKnight?
Iyadoo $100 milyan oo maalgashi lagu sameeyay 2014, McKnight wuxuu iskaashi la sameeyay Mellon si uu u abuuro balaadhan Istaraatijiyadda Wax-qabadka Carbon sanduuqa dhigaya dollar yar shirkadaha kaarboon wasakhowga ah iyo in ka badan oo shirkado ah oo waxtar u leh kaarboonka. Iyada oo ku saabsan 1,000 hanti, fundku wuxuu yareeyaa xoojinta kaarboonka ee faylalka 50% marka la barbar dhigo bar-tilmaameedka, dhammaan iyada oo ka sarreysa heerka dhaqaale ahaan. Guul-guulaysi
Waa maxay sababta asaasyo badan aysan uga go'in inay eber saafiga ah galaan?
Hagaag, qof waa inuu noqdaa kan ugu horreeya! Waxaan u mahadcelineynaa hal asaaggeena ah ee u heellan inay eber-net-ka ah-David Rockefeller Fund-maxaa yeelay waxay noo ahaayeen kheyraad muhiim ah. Waxaan sidoo kale ka mahadcelineynaa hantiilayaasha hantida aadka u weyn - lacagaha hawlgabka sida CalSTRS iyo CalPERS iyo machadyada tacliinta sida Harvard iyo Jaamacadda Michigan - kuwaas oo ku dhawaaqay yoolalkan mustaqbalka fog. Waxaan aaminsanahay in aasaasyo badan ay samayn doonaan ballanqaadkan muhiimka ah bilaha iyo sanadaha soo socda. Sida maalgashiga saamaynta, waxaanu rumaysanahay in waayo-aragnimadeena iyo daah-furnaanteena ay faa'iido u yeelan doonaan kuwa kale ee la legdamaya sida xilligan oo kale noogu yeero inaan ficil qaadno.